BlackBox: Njodzi manejimendi yeESPS Kurwisa Spammers | Martech Zone
Svondo, October 19, 2014 Douglas Karr
NhemaBox inozvitsanangura seyakaunganidzwa, inogara ichigadziriswa dhatabhesi dzinenge dzese kero dzeemail dzinotengwa nekutengeswa pamusika wakavhurika. Inoshandiswa chete ne Email Vashandi Vanopa (ESPs), kuitira kufanotara kana runyorwa rwevatuma rwune mvumo-based, spammy, kana chepfu chaiyo.
Mazhinji ematambudziko ayo eemail vanopa sevhisi vanopinda mairi ndeye-inobhururuka-ne-husiku spammers iyo inotenga hombe runyorwa, kuunza iyo muchikuva chavo, uye wozotumira kwairi uchiziva kuti ivo havana mvumo. Ivo vanoziva kuti kutumira kune iyo rondedzero kuri kuunza toni yezvichemo uye pamwe kuita kuti vadzingwe kubva pachikuva cheemail - asi ivo varipo kungo tora iyo yekutanga email kubuda. Spamming rondedzero haisi yekugadzira hukama!
Dambudziko neizvi nderekuti vanopa rubatsiro emaimeri vane mukurumbira nevapi vepainternet service (ISPs). Kana iyo ISPs ikaona hombe yekunyunyuta ichiuya kubva kune imwe yeemaimeri maseva, ivo vanozo bvisa email yese kuuya kubva kuseva iyo! Izvi zvinoreva kuti mutengi wese ane email anotumira kubva kuseva iyoyo akakanganiswa… izvo zvinogona kuve iwe!
Uchishandisa sevhisi senge NhemaBox zvine hungwaru, ndine chivimbo chekuti mutumwa anogona kufanotaura njodzi inosanganisirwa newateereri ari kuuya. ESPs inofanira kungwarira, zvakadaro. Ini ndaive neESP yakambondiudza zvangu kuti runyorwa rwanga rwapfuura chikumbaridzo uye ndaifanirwa kuita nharo navo. Kunyangwe ini ndakanga ndisina kutenga rondedzero, pakanga paine maemail kero akakwana pane angu runyorwa ayo akaenzana imwe yeaya madhatabhesi andaive ndakamirirwa seye spammer - PASI pekuti ini ndaive nemvumo uye ndanga ndichitumira kwemakore. Vakazoregedza, ini ndakatumira kune yangu runyorwa uye chichemo changu mwero waive 0%.
Rangarira, iri harisi dhatabhesi remakero eemail asiri kutumirwa, uyezve harisi runyorwa rwema kero eemail ayo asina mvumo. Iwo maemail kero ayo anowanzo kuve yakatengwa ikatengeswa neemail zvinyorwa zvinyorwa. Ndine chivimbo chekuti email yangu iri muBlackbox… asi ini ndinonyorera kumazana enhau.
Iri ibasa rakakosha kune chero ESP iri kuve nematambudziko nema spammers anoparadza mukurumbira wavo!
Tags: bhokisi demablacklistchikero chetsamba yemumhepoemail kero njereemail blacklistemail kuburitswaemail mukurumbiraemail njodzi kuongororwaemail njodzi manejimendiemail service provider
Pasina Kufona Kuchengeta, Yako Campaign Attribution iri Kukura Zvakawanda zvisiri izvo